Ahoana ny fomba fanaovana sarintany.
Posted by Tranquillus | Jan 2, 2021 | Ao amin'ny tranonkala
Tongasoa eto amin'ity taranja ity, "Ahoana no fomba hanaovana sarintany saina".
Jacky Buensoz no anarako ary izaho no mpanorina ny orinasa Genius Training Academy Sàrl. Mpanazatra ao Udemy aho ary manana traikefa matanjaka amin'ny tontolon'ny fiofanana. Nampiasa ny sarintan-tsaina aho hampivelarana ny fiofananay nandritra ny taona maro.
Amin'ity fampianarana ity dia hianaranao ny fomba hampitomboanao ny herin'ny eritreritra, ny mémoire sy ny anao famoronana mampiasa ny iray amin'ireo paikady fisainana mahomby indrindra misy ankehitriny.
Ny fampianarana dia mizara ho fizarana samihafa miaraka amin'ny atiny fifandraisana ary fampiharana azo ampiharina mba hitondrana tsikelikely anao vokatra irina. Handeha tsikelikely izahay mba hahitanareo mampiasa amin'ny fiainanao izay hianaranao amin'ity taranja ity.
Ity fampianarana ity dia natao ho an'ny olona rehetra te mianatra ny fototr'izany nieritreritra, izay maniry hanatsara ny fitadidiany, ny fahaizany mamorona ary maniry ny hahomby kokoa amin'ny zava-bitany manokana ...
Ahoana ny fomba fanaovana sarintany. January 10th, 2021Tranquillus
HAMAKY Lasa SA ambony indrindra amin'ny serivisy fitsikilovana
Teo alohaAmpitomboy ny fahombiazan'ny 5S
manarakaVokatry ny parallax ao amin'ny PowerPoint 2019
BDES: fiasa vaovao amin'ny 2021?
30 tapitrisa euro hanohanana ny asa mpiara-miasa
Fangatahana ampahibemaso ho an'ny fanehoan-kevitra momba ny Dika 3.2.a an'ny Repository Requirements ho an'ny Mpanome informatika rahona (SecNumCloud)
Tombontsoa 8 tsy nampoizina amin'ny fianarana fiteny vaovao!